पूर्वप्रधानमन्त्री गिरीको अन्त्येष्टि साधारण हिसावले गरिने, सलामी अस्वीकार – Shuva News
पूर्वप्रधानमन्त्री गिरीको अन्त्येष्टि साधारण हिसावले गरिने, सलामी अस्वीकार
Shuvanews ३ पुष २०७५, मंगलवार December 18, 2018 162 Views
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीको दाहसंस्कार भीआइपीको जसरी नभएर सर्वसाधारण नागरिककै जसरी हुने भएको छ । सरकारले भीआइपीको निधनमा सलामी दिने प्रचलन छ । तर, गिरी परिवारले सलामी अर्पण गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री गिरीकी धर्मपत्नी साराह गिरीले सलामी दिनेबारे आफुलाई सोधिएपनि उहाँको अन्त्येष्टि साधारणरुपमा गर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार डा. गिरीले मृत्युपूर्व नै आफ्नो अन्त्येष्टि साधारण किसिमले गर्नू भनेका कारण सोही अनुसार अन्त्येष्टी गर्न लागिएको हो ।
बुधबार गिरीको अन्त्येष्टि पशुपति आर्यघाटमा रहेको विद्युतीय शवदाह गृहमा गरिनेछ । आज बिहान बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा ९३ वर्षको उमेरमा निधन भएका गिरीको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि उनकै निवासमा राखिएको छ । शुभेच्छुकले त्यहाँ पुगेर श्रद्धासुमन अर्पण गरिरहेका छन् ।